Light Iron wuxuu balaariyaa xalalka cusub ee iskaashiga fog | NAB Show News | 2020 NAB Show Iskaashatada Warbaahinta iyo Soosaaraha NAB Show LIVE. Warka Injineeriyada ee Warbaahinta
Bogga ugu weyn » Featured » Light Iron wuxuu balaariyaa xalalka cusub ee iskaashiga fog
Adeeg bixiyaha-soo-saarka kadib wuxuu sii wadaa inuu awood u yeesho hal-abuurka iyadoon wax is-dhaafsi ah jirin, isagoo ku dhawaaqaya adeegyo fog oo dabacsan, dabacsan iyo ku darista kooxda hoggaanka.
Tan iyo markii la aasaasay 2009, Light Iron, oo ah shirkad Panavision, waxaa ka go'an inay dib u qiimeyso qulqulka shaqada ka dib. U hibeynta hal-abuurnimada waxay ka dhigtay shirkadda inay si gaar ah ugu diyaar garowday inay la kulanto caqabadaha xilligan jira, taas oo dhammaan warshadaha sawir-qaade lagu qasbay inay dib uga fiirsadaan sida ay u shaqeyso, laga soo bilaabo illaa boostada. Maaddaama soo-saarku sii kordhayo raadinta siyaabo looga dhigo shaqadooda socod fog, Light Iron wuxuu kaga jawaabey hal-abuurro kala duwan oo loogu talagalay joornaalada, tifaftirka qadka, DI, iyo dhameystirka ee ballaarinaya macaamiisha ikhtiyaarrada hal-abuurka ah meel kasta oo ay ka shaqeynayaan, xitaa hadday tahay bixinta shirkadda xarunta dib u bilaabay
Sii xoojinta taageerada Light Iron ee dadaalladaan cusub, shirkaddu waxay soo dhaweysay saddex maamule oo caan ah kooxdeeda hoggaanka sare. Seth Hallen, Phil Harrelson, iyo Laura Borowsky waxay gacan ka geysan doonaan kobcinta kaabayaasha shirkadda, ballaarinta adeegyadeeda, iyo taageeridda hibada guriga dhexdeeda ah iyagoo sii wadaya kobcinta iskaashiga, hal-abuurnimada, iyo jawiga nimble ee Light Iron si fiican loogu yaqaan.
Peter Cioni - Agaasimaha Wada-Shaqeynta
Markii wax soo saarkii la joojiyay horaantii sanadkan iyadoo la wajahayo qufulada adduunka oo dhan si loola dagaallamo faafitaanka COVID-19, mashaariicda horey loogu soo diray boostada waxay ahayd inay la qabsadaan duulimaadka si ay u gaaraan shaqadooda socodsiinta fog. Peter Cioni, oo ah agaasimaha maamulka Iron Light ayaa yidhi: "Bilowgii, waxay ahayd himiladeenna Light Iron si aan ugu hagno macaamiisheenna wax soo saarka boostada ee teknoolojiyada had iyo jeer isbedelaya iyo qulqulka shaqada si ay diiradda u saaraan sheekadooda iyaga oo aan tanaasul samayn." "Markii aan muddo dheer qaadanay aaladaha mobilada iyo iskaashiga fog, waxaan awoodnay inaan si habsami leh ugu wareejinno fannaaniinteena iyo macaamiisheenna goobta, innagoo keeneyna khibradeena xarunta si xaq ah guryahooda iyadoo aan ka maqnaan wax garaac ah - ama waqti kama dambeys ah."
Light Iron wuxuu hormuud u ahaa shaqooyinka maalinlaha ee moobiillada, shirkadduna waxay sii wadaa inay hal-abuurnimo ku sameyso kantaroolka 'Outpost Remote Control' (RC), oo ah jiilkii ugu dambeeyay ee ay soo saarto shirkadda 'Outpost' ee udhow meel u dhow, taas oo hadda u oggolaanaysa midab-bixiyaha 'Light Iron dailies' inuu xakameeyo nidaamka oo dhameystiran fog, iyadoon loo eegin masaafada juqraafiyeed. Nidaamka 'Outpost RC' waxaa si deg deg ah loogu diri karaa xafiiska wax soo saarka, xarunta xogta, ama meel kasta oo ku haboon wax soo saarka, iyadoo la siinayo dhammaan faa'iidooyinka waqtiga dhabta ah ee xalka u dhow iyada oo aan loo baahnayn midab-sameeye inuu jir ahaan goob joog u ahaado. Tani waxay u oggolaaneysaa wax soo saarku inay hoos u dhigaan tiradooda shaqaalaha goobta - taas oo weli ahmiyad gaar ah inta lagu jiro COVID-19 - isla mar ahaantaana siineysa sawir qaadayaasha dabacsanaan si ay ula shaqeeyaan mid kasta oo ka mid ah joornaalada maalinlaha ah ee ku qoran liistada Light Iron, iyadoon loo eegin goobta midab-geystuhu.
Light Iron wuxuu sidoo kale balaariyay xalalka kireynta tifaftirka qadka tooska ah si uu u keeno khibrada ugu sareysa ee goobta New York ay siinta tooska ah ugu bixiso macaamiisha, kuna qalabeeyo rakibo guri oo dhameystiran oo si aamin ah ugu xiran kaabayaasha Light Iron. Bixinta Light-galoof-galoofyada cad waxay siisaa wax kasta oo macmiilku u baahan doono, laga bilaabo alaabta guriga illaa qalabka - oo ay ku jiraan kormeeraha kalsoonida SDI - oo leh taageero dhammaystiran, tallaabo tallaabo ah si nidaamka loo hagaajiyo. Marka la dejiyo, nidaamka macmiilku wuxuu ku xiraa oo ka akhriyaa kuwa aaminka ah AVID Server Nexis oo ku yaalay Light Iron, oo marin u hela kaabayaal isku mid ah oo lagu kalsoon yahay, taageero, iyo waayo aragnimo kaydinta la wadaago oo ay ku raaxeysan doonaan haddii ay ka shaqeeyaan xarunta. Kireynta tifaftirka qadka tooska ah ee Light Iron ayaa hadda la geeyay aagga Magaalada New York, iyadoo lala beegsanayo ballaadhinta gobollada horaantii 2021.
Wixii ah 'DI' iyo dhameystirka, 'Light Iron' wuxuu bixiyaa noocyo isku dhafan oo isku mid ah (toos ah) iyo xalal dib u eegis asynchronous ah si loo daboolo baahida macaamiisha. Mashruucyada 'Light Iron' dhawaan ku dhammeeyey qulqulka shaqooyinka fog waxaa ka mid ah taxanaha Waxa Aan Ku Sameyno Hooska, Xiga, Boqoradda Gambit-ka, Ugaarsiga Bly Manor, iyo Fogaanta Bulshada, iyo astaamaha Hal Habeen ee Miami, Wand Darkly, iyo Maxaa Dastuurku Waa Meedhay.
Intaa waxaa sii dheer, tan iyo dabayaaqadii Juun, Light Iron wuxuu mar kale martigaliyaa macaamiisha shaqsi ahaan. Shirkaddu waxay u heellan tahay bixinta khibrad aamin ah, dabacsan, oo hufan, waxayna u sameysay nidaamyo nabadgelyo cusub macaamiisha ka shaqeeya xarunta, oo ay ku jiraan barnaamijyada nadaafadda oo dhameystiran, hababka adeegga cuntada ee la cusbooneysiiyey, iyo xaddidnaanta deganaanshaha ee adag iyo fogeynta habboon. Siyaasadaha iyo habraacyadii ugu dambeeyay iyo sidoo kale macluumaadka heerka ugu dambeeya ee mid kasta oo ka mid ah goobaha Light Iron waxaa laga heli karaa xarunta Light Iron ee COVID-19, www.lightiron.com/covid.
Taageerida balaarinta adeegyada, Light Iron waxay ku xoojisay kooxdeeda hogaaminta shaqaalaysii ugu dambeeyay ee Seth Hallen, Phil Harrelson, iyo Laura Borowsky.
Seth Hallen - Agaasime Isuduwaha
Seth Hallen wuxuu ku biirayaa Light Iron oo ah agaasime maamul, isagoo u keenaya khibrad ballaadhan soosaarka iyo boostada kooxda, oo ay weheliso tobanaan sano oo khibrad hoggaamineed ah iyo xiriiro ballaadhan oo warshadeed. Iyadoo leh asal ahaan milkiile cutub ganacsi dhexdiisa Sony, ganacsade, iyo agaasime guud, Hallen waxay hada u shaqeysaa Madaxweynaha Hollywood Ururka Xirfadleyda (HPA), door uu hayey tan iyo 2016.
"Daawashada Iftiinka Birta ee kororka tobankii sano ee la soo dhaafay waxay ahayd mid la yaab leh," ayay tiri Hallen. Bilowgii, shirkaddu waxay dib uga fakaraysay sida wax soosaarka boostada loo sameeyo iyadoo ay ku sii kordhineyso sumcaddeeda dhaqankeeda qoysaska ee macaamiisha diirada saaraya. Xalalkan cusub ee shaqo socodsiinta ah waxay macaamiisha u fidiyaan xitaa dabacsanaan badan iyagoon u hureynin midkood aragtidiisa hal abuurka ah. Waxaan marwalba jeclaan jiray ku qanacsanaanta hal-abuurka wax soo saarka boostada, waana ku faraxsanahay inaan la shaqeeyo farshaxanada Light Iron, kuwaas oo si gaar ah ugu heellan qabashada horumarka. filimada tiknoolajiyada iyo hormarinta xalalka cusub si shaashadda shaashadda loogu gudbiyo. ”
Phil Harrelson - VP ee Hawlgallada
Sida Light Iron's VP ee Hawlgallada, Phil Harrelson ayaa mas'uul ka noqon doona maareynta howlaha guud ee shirkadda, iyadoo si gaar ah diiradda loo saarayo hirgelinta nidaamyada iyo geeddi-socodka si looga caawiyo si wanaagsan ugu adeegida macaamiisha. Harrelson wuxuu in ka badan 20 sano khibrad u leeyahay soo-saarka kadib
warshadaha guud ahaan VFX, wargeysyada, wax soo saarka, iyo iibinta, oo ay ku jiraan lix sano oo ka shaqeynayay Deluxe. Wuxuu la yimid xirfad aad u tiro badan oo kala duwan oo uu u soo saaray labadaba macmiil - isagoo u shaqeynayey in ka badan toban sano kormeeraha boostada iyo soo saaraha boostada ee taxanaha iyo astaamaha - iyo iibiye.
Laura Borowsky - Agaasimaha Horumarinta Ganacsiga
Agaasimaha Cusub ee Horumarinta Ganacsiga Laura Borowsky waxay keeneysaa khibradeeda baaxad leh oo soo xarootay mudo 19 sano ah oo ka shaqeyneysay muuqaalada teedhada, indie, iyo xayeysiisyada si loo balaariyo kooxda hormarinta ganacsiga Light Iron, oo ay hogaamiso Katie Fellion. Borowsky waxay shaqadeeda kubilaawday Technicolor, shaqadeedana waxay kusameysay cilaaqaad adag macaamiisha istuudiyaha iyo waliba hal abuur ay kamidyihiin filimada iyo agaasimayaasha, taas oo kadhigaysa iskaashi xoogan Panavision. Ku saleysan Los Angeles, Borowsky waxay ka timid Atlanta, doorkeeda cusubna waxaa ku jiri doona diiradda horumarinta suuqa Koonfur-bari.
- Waqti badan ayaan ku qaadanay hubinta in aan haysanno kooxda ugu fiican ee taageerta dhammaan baahiyaha macaamiisheenna, wajigan shaqaalayntana wuxuu muujinayaa tallaabada xigta ee muhiimka ah ee dadaalkan, ayay tiri Cioni. “Seth, Phil, iyo Laura waxay keeneen qibrad aad u tiro badan oo khibrad warshadeed ah. Iyaga mid waliba waxay kobcin doontaa aragtida hal abuurka ah ee aan siin karno macaamiisheenna oo ay na siin doonaan meesha ugu fiican si aan ugu sii wadno jaantuskeena koorsadeena iyo wixii ka baxsan carqaladda ay keentay COVID-19. ”
“In kasta oo caqabado waawayn la soo bandhigay bilihii la soo dhaafay, haddana waxaan ku rajo weynahay labadaba mustaqbalka warshadeenna iyo awooddeena gaarka ah ee aan ku taageerayno macaamiisheenna,” ayuu raaciyay Cioni. “Marka boostada iyo wax soo saarku ay sii socdaan, Iftiinka Iron Iron wuxuu ku sii jeedaa meeshii uu had iyo jeer ahaa, si loo xoojiyo hal-abuurka macaamiisheenna. Waxaan si joogto ah u horumarinaynaa habab cusub oo aan uga shaqeyn karno sidii aan u dabooli lahayn baahidooda, waxaana had iyo jeer halkaan u joognaa inaan ka caawinno sidii ay ku heli lahaayeen - ama u abuuri lahaayeen - xalka ugu fiican ee mashruucyadooda shaqsiyeed. Kordhinta adeegyadan iyo shaqaalaheenna, macaamiisheennu waxay ka faa'iideysan karaan dabacsanaan ka sii badan sidii hore oo waxay ku raaxeysan karaan waayo-aragnimo soo-saaris dambe oo aan xaddidneyn oo hubineysa inay arki doonaan aragtidooda laga soo bilaabo shaashadda, iyadoon loo eegin meesha iyo sida ay u doortaan inay shaqeeyaan . ”
Ku saabsan Galka Birta
Light Iron, oo ah shirkad Panavision ah, ayaa si weyn loogu aqoonsan yahay inuu yahay hogaamiye teknolojiyad iyo shuraako farshaxan ku leh soosaarka dhamaadka ilaa dhamaadka iyo xalalka boostada. Filim sameeyayaasha, istuudiyaha, hal abuureyaasha iyo teknoolajiyaddu waxay ku tiirsan yihiin khibradda Light Iron si ay u gudbiyaan qulqulka shaqooyinka dhijitaalka ah, laga bilaabo wargeysyada iyo maareynta xogta illaa midabka ugu dambeeya iyo adeegyada keydka warbaahinta. Iyada oo leh meelo kiro ah oo qadla'aan ah iyo tas-hiilaad ku baahsan Waqooyiga Ameerika oo leh awood fog, Light Iron wuxuu ku takhasusay noqoshada nacayb si uu ugu adeego baahiyaha gaarka ah ee filimka muuqaalka iyo mashaariicda dhacdooyinka leh.
Previous: Vizrt Group waxay shaqaalaysiisaa Daniel Url si loo xoojiyo diiradda macaamiisha ee Hormarinta Wax soo saarka
Next: Farshaxanka Farshaxanka ayaa soo galay xillikiisii ​​9aad Koonfurta Florida PBS!